China Carbide Metal Insert ho an'ny fanodinana / famadihana RPMT1003MO-TT-DH122 mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Carbide Metal Insert For Milling / Turning RPMT1003MO-TT-DH122
Ny vokatray dia malaza be amin'ny teny, toa an'i Amerika atsimo, afrika, asia sns. Ny orinasa dia "mamorona vokatra kilasy voalohany" ho tanjona, ary miezaka manome ny mpanjifa vokatra avo lenta, manome serivisy avo lenta aorinan'ny varotra sy fanohanana ara-teknika ary tombontsoa ho an'ny mpanjifa, mamorona asa sy ho avy tsaratsara kokoa!
Mino ny mpiasa rehetra fa: Ny kalitao dia manangana ankehitriny ary ny serivisy dia mamorona ho avy. Fantatray fa ny kalitao tsara sy ny serivisy tsara indrindra no fomba tokana hanatratraranay ny mpanjifanay sy hahatratrarantsika koa ny tenanay. Miarahaba ny mpanjifa amin'ny teny rehetra izahay mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy. Ny vokatray no tsara indrindra. Rehefa voafantina, tonga lafatra mandrakizay!
1. Vita amin'ny vovoka karbida virjina 100%, fanoherana tsara sy henjana;
2. Fampisehoana CVD / PVD avo lenta, miaraka amin'ny faritra avo sy malefaka;
3. Nanao fanaraha-maso 200%, eo ambanin'ny fifehezana ny rafitra kalitao ISO9001: 2008;
4. Famolavolana chip-breaker matihanina, manome fahombiazan'ny fanapahana tonga lafatra;
5. refy marina, avo lenta;
6. Fiainam-pitaovana maharitra sy maharitra;
Ho an'ny vy
TDC2 / 3/4 / 5 BP…
Ho an'ny Stainless Steel
TDC2 / 3/4 / 5 BPG20B
Ho an'ny Aluminium
TDC2 / 3/4 / 5 BU810
TDC2 / 3/4 / 5 p
BPGO5B M05-M15 Mainty volondavenona manga Miaraka amin'ny hamafin'ny hafanana avo sy ny fahasimbana plastika resistanceto tsara. Mety amin'ny fanapahana haingam-pandeha haingam-pandeha sy famaranana ny vy austenitika vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy karbaona.
BPG20B M10-M30P10-20 Mainty volondavenona manga Carolide micro-graide mifangaro ao amin'ny PVD. Mampiasà varotra vy tsy misy fatrany eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha farany ambany. Rehefa mila haingam-pandeha tsara sy avo lenta ianao. Omeo ny fanapahana fiakarana lavorary.
Teo aloha: CNC Metal Working Inserts APMT1135PDER-H2
Manaraka: HRC55 Fihodinan-drivotra mahery vaika (5D)